Rita, Writing for My Sake!: အချစ်၏ နောက်ဆက်တွဲ စာမျက်နှာ - Myanmar Books Catalogue
Posted by Rita at 4/20/2010 11:45:00 AM
ဒီနေ့ ဝင်းဝင်းလတ်ရဲ့ အချစ်၏ နောက်ဆက်တွဲ စာမျက်နှာများအကြောင်းရေးထားတာကို ဖတ်ရတာ ၂ခါရှိပြီ...... တို့လည်းမဟေသီမှာ စောင့်ဖတ်ခဲ့ရတာ.... အခုပြန်ဖတ်ချင်နေပြီ... စာအုပ်သွားရှာဦးမှပဲ......... :)
ကိုယ်သိပ်ကြိုက်ပြီး အပိုင်မရှိသေးတာ ဒီစာအုပ်ပဲ။ ကိုယ်ထွက်လာတုန်းက လုံးချင်းမထုတ်ရသေးဘူးထင်တယ်။ ဒီတစ်ခါပြန်ရင် ၀ယ်ခဲ့မယ်။
၀တ္ထုဖတ်ပြီး ဇာတ်ကောင်တွေ အပြင်မှာ သက်ရှိထင်ရှားရှိနေတယ်လို့ ထင်ခဲ့မိတယ်။ ခုတောင်ပြန်ဖတ်ချင်သွားတယ်။
ဆရာမဆုံးတုန်းက တို့လည်း တော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတာ။ သူ့စာတွေ ထပ်ဖတ်ခွင့်မရတော့ဘူးဆိုပြီး။း(
I also like this story very much. I think she was died by Cancer but I am not sure.
ဒေါက်တာ ဝင်းဝင်းရှိန် (ခ) စာရေးဆရာမ ဝင်းဝင်းလတ် က 2006 ပတ်ဝန်းကျင်လောက်မှာ NGO တစ်ခုမှာ အလုပ်လုပ်နေဆဲ၊ အင်းစိန်ထောင်မှာ ပညာပေးသင်တန်းတစ်ခုပေးပြီး အပြန် ဘုရင့်နောင် ပိတောက်ချောင်းရဲစခန်းနားမှာ သူစီးလာတဲ့ကားနဲ့ တခြားကားတစ်စီး တိုက်မိပြီး ကွယ်လွန်ပါတယ်။
အဲဒီနေ့က အင်းစိန်က အပြန် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တချို့ကို ကားကြုံခေါ်တင်လာတာမို့၊ ဆရာမက အရင် ကားနောက်ခန်းမှာ ထိုင်နေကျကနေ ကားရှေ့ခန်း၊ ဒရိုင်ဘာဘေးကို ပြောင်းထိုင်ခဲ့တယ်။ လူကြုံပါလာတဲ့လူတွေ လမ်းတဝက်မှာ ဆင်းကျန်နေရစ်တော့လည်း နောက်ကို ပြန်မရွှေ့ဖြစ်တော့ပဲ ရှေ့မှာပဲ ဆက်ထိုင်ခဲ့တယ်။ အခင်းဖြစ်တော့ ဆရာမ စီးလာတဲ့ အခြမ်းကို အတိုက်ခံရတယ်။ on the spot ဆုံးသွားတယ် ဆိုတယ်။
တချို့ကလည်း အရင်လိုသာ နောက်ခန်းမှာ စီးခဲ့ရင် ခုလောက်ထိ ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ် ပြောကြတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူ့ဆီက အနုပညာရော၊ ဆေးပညာနဲ့ပတ်သတ်တာတွေရော အများကြီး မျှော်လင့်နိုင်သေးတဲ့ အချိန်မှာ ခုလိုဖြစ်ရတာ အတော် ဝမ်းနည်း နှမျောဖို့ကောင်းတဲ့ ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုလို့ ခံစားမိပါတယ်။
သူဆုံးသွားတော့ မဟေသီမှာ ရေးလက်စ အခန်းဆက် "ဘဝ၊ အလုပ်နှင့် အချစ်ကို တည်ဆောက်ခြင်း" က အပြီးမသတ်သေးဘဲ ကျန်ခဲ့တယ်။
So, I am wrong. :(
Is it possible to re-post the pdf file of the novel? I wasn't able to download it from the site you've directed at the older post. Thanks millions!
အရင် post မှာ ချိတ်ပေးထားတဲ့ scrib က link မှာလည်း ဝတ္ထု အစ/အဆုံး မပါဘူး ဖြစ်နေတယ်။ တဝက်တပျက်နဲ့မို့ ဖတ်မိရင် မဆတ်တငံ့ ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ dl မရဘူး ဆိုပေမယ့် ဒီတိုင်း ဖတ်လို့တော့ ရမယ်ထင်ပါတယ်။
အဲဒီစာအုပ်ကိုလဲ အဲဒီတနေရာမှာပဲ တွေ့မိပါတယ်။ တခြားမှာ တင်ထားတာ တွေ့ခဲ့ရင်တော့ side bar မှာ ဖြစ်ဖြစ်၊ post သပ်သပ် တင်ပြီးတော့ ဖြစ်ဖြစ် ချိတ်ပေးသွားပါမယ်။
အကောင်းဆုံးကတော့ မြန်မာပြည်ကို လှမ်းမှာတာပါပဲ။
ဒီ link မှာ dl ကြည့်ပါဦး။
ခုပဲ google ကြည့်လိုက်တာ။
ရပါတယ်။ အဲဒီ link မှာ အစ/အဆုံး ပါပါတယ်။
wow that was very fast! Thank you very, very much :)
ကိုယ်တော့ မောင်နှမတွေနဲ့ မလုရဘူး။ ဖေဖေနဲ့ လုခဲ့ရတာ။
Lazy to log in, register account. Pls help to submit below comment on your blog after you read.
- ကြိုက်လွန်:လို့အပိုင်ဝယ်သိမ်:ထားပါတယ်၊ နောက်ဆုံးခန်:မှာ ခင်ဦးနွယ် (မခင်ဦးမေ မဟုတ်) ကိုပေးညားသင့်မညားသင့် အမေနဲ့ ထငြင်းတာ ရန်တောင်ဖြစ်တော့မလို့ ဟိ ကိုက ညားရမယ့်ဘက်က၊ ခါးသီးတဲ့ဘဝမှာ ပျားရည်ချိုလေး၁စက်၂စက်တော့ သောက်ခွင့်ရဦးမှလို့ ကိုယ်ကသဘောရလို့ပါ၊ အမေကတော့ ၁ခါသေဘူးတာတောင် မမှတ်ဘူးလို့ ယူဆတယ် ရီတာကရော? ကြုံလို့ပြောရရင် အရိပ် ဝထ္တုဖတ်တုန်းကလဲအဲလိုပဲ အမေနဲ့ထငြင်းတာ၊ အမေက မိဘဘက်က၊ ကိုယ်က သားသမီးဘက်က ဟီး
ကိုယ်တော့ ဘယ်သူနဲ့မှ မငြင်းခဲ့ရဘူး။ အခွင့်မသာလို့။ အပြင်လောကမှာတော့ ခရေဖြူပြောသလို ဖြစ်သင့်ပါတယ်လေ။ ဒါပေမဲ့ ဝတ္ထုအနေနဲ့ကျတော့ လွမ်းပြီးသိမ်းရင် ပိုထိပြီး ပိုစွဲမယ် ထင်ခဲ့တယ်။ ကလေးတွေလည်း ကြီးမှတော့...